फेसबुकले किन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग माफी ? – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
फेसबुकले किन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग माफी ?
| प्रकासित मिति : ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१
काठमाडौँ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नाम बर्मेली भाषाबाट अंग्रेजीमा अनुवाद गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग फेसबुकले माफी मागेको छ ।
बर्मेली भाषाबाट अंग्रेजीमा अनुवाद गर्दा सीको नाममा प्राविधिक कारणले अर्कै अर्थ लाग्ने शब्द देखिएको भन्दै उसले शनिबार माफी मागेको हो । सी हाल दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र म्यानमार भ्रमणमा छन् । भ्रमणको दोस्रो दिन सी र म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ साङ सुकीबीच दर्जनौं सम्झौता भएका थिए । सोही सम्झौतापछि सुकीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा सीबारे उल्लेख गरिएको थियो ।
तर जब फेसबुकमा त्यसको अंग्रेजी अनुवाद गरियो राष्ट्रपति सीको नाममा ‘अश्लील अर्थ’ लाग्ने अंग्रेजी शब्द देखियो । स्थानीय न्युज जर्नल ‘द इर्रावाड्डी’ मा सोही गलत अंग्रेजी शब्दसहितको ‘हेडलाइन’ समेत प्रकाशित भएको थियो ।
‘फेसबुकमा बर्मेलीबाट अंग्रेजी भाषामा भएको गलत अनुवादसम्बन्धी प्राविधिक विषयलाई हामीले समाधान गरेका छौं । यस्तो गल्ती हुनुहुँदैन्थ्यो र भविष्यमा यस्ता गल्ती नहोऊन् भनेर हामीले कदम चालेका छौं । यो गल्तीका लागि हामी इमानदारीका साथ माफी माग्छौं,’ फेसबुकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आजको कान्तिपुरमा यो खबर छ।
ब्रह्मदेव­झुलाघाट ­दार्चुला­ टिङ्कर सडक निर्माणलाई तीव्रता, कालापानी सम्म सडक पुग्ने
बामदेव नै राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने ठोकुवा। ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१
१५ दिनमा निगमले कमायो २५ करोड १५ लाख: उपभोक्ता ठगिँदै ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१
भरतपुर महोत्सवको तयारी पुरा, शुक्रबार प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१
सर्लाहीमा तस्करलाई स्वर्णयुग ! खुलेआम तस्करी भईरहदा पनि प्रदेश प्रहरी किन बेखबर? ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१
चिया, कला र कविताको तेस्रो भाग फागुन १७ गते हुने ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१
यत्र तत्र अब्यबस्थित होड्रिङ्गबोर्डले भरतपुर महानगर कुरुप बन्दै, गृहको निर्देशन अलपत्र ! ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१
नेकपामा बबन्डर सुरू, राष्ट्रिय सभामा गौतम कि खतिवडा ? सचिवालयबीच गम्भीर मतभेद ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१
प्रधानमन्त्रीलाई भट्टराईको कटाक्ष: गाउँमा सानो बुकुरो भएकाहरुले कसरी काठमाडौंमा महल खडा गरे ? ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१
जनतावाट तिरस्कृत वामदेवका लागी किन संविधान संशोधन ? ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१
रिकभरीङ्ग नेपालको बाग्मती अध्यक्षमा समाजसेवी दिवाकर चयन ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१
गृहमन्त्री बादल तीनदिन चितवनका विविध कार्यक्रममा सरिक भई फर्किए ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१
From Wuhan to Mamallapuram: Relations between India and China ६ माघ २०७६, सोमबार ०३:०१